साथीहरूसँग घडी 23
कुन महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा खगोल संसारले आध्यात्मिक तवरमा फरक पार्छ? यी सर्तहरू प्रायः यी विषयहरूसँग सम्बन्धित किताबहरू र पत्रिकाहरूमा अन्तरनिर्मित रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यो प्रयोग पाठकको दिमागलाई भ्रमित गर्न उपयुक्त हुन्छ।
"एस्ट्रेल वर्ल्ड" र "आध्यात्मिक दुनिया" पर्यायवाचक शब्दहरू होइनन्। तिनीहरू विषयसँग परिचित व्यक्तिले यति प्रयोग गर्न सक्दैनन्। सूक्ष्म संसार अनिवार्य रूपमा प्रतिबिम्ब को एक संसार हो। यसमा भौतिक संसार र सबै शारीरिक क्रियाकलापहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन्, र सूक्ष्ममा पनि मानसिक संसारको विचारहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन् र मानसिक संसार मार्फत आध्यात्मिक संसारका विचारहरू पनि। आध्यात्मिक संसार एक क्षेत्र हो जहाँ सबै चीजहरू उहाँ जस्तो छ भनेर चिनिन्छ, त्यहाँ यसमा सजगतापूर्वक बस्ने मानिसहरूलाई कुनै छल छैन। आत्मिक संसार भनेको त्यस्तो संसार हो जहाँ कुनै पनि मानिस भित्र पस्दा त्यसले कुनै गडबड फेला पार्दैन, तर जान्दछ र चिनिन्छ। दुई संसारको विशिष्ट विशेषताहरु इच्छा र ज्ञान हो। इच्छा सूक्ष्म संसारमा शासक शक्ति हो। आध्यात्मिक संसारमा ज्ञान नै शासन गर्ने सिद्धान्त हो। जीवहरू सूक्ष्म संसारमा जनावरहरू भौतिक संसारमा बास गर्छन्। तिनीहरू उत्प्रेरित र इच्छा द्वारा निर्देशित छन्। अन्य प्राणीहरू आध्यात्मिक संसारमा बसोबास गर्छन् र तिनीहरू ज्ञानद्वारा प्रभावित हुन्छन्। कुनै व्यक्ति अलमल्लमा परेको छ र कुनै कुराको लागि अनिश्चित छ भने उसले आफू "आत्मिक विचारधारा" भएको होईन भनेर सोच्न आवश्यक पर्दैन, यद्यपि यो सम्भवतः उसको मानसिक हुन सक्छ। एक जो ज्ञानको आध्यात्मिक संसारमा प्रवेश गर्न सक्दछ उसको बारेमा यसको कुनै अनिश्चित अवस्था हुँदैन। ऊ केवल हुन चाहँदैन, न त अनुमान लगाउँछ, न विश्वास गर्छ, वा सोच्छ कि उसलाई थाहा छ। यदि उसलाई आत्मिक संसार थाहा छ भने यो उससँग ज्ञान हो र अनुमानित कार्य होइन। अस्ट्रेलियाको संसार र आध्यात्मिक संसारको बीचको भिन्नता चाहाना र ज्ञानको बीचको भिन्नता हो।
के शरीरको प्रत्येक अंग बुद्धिमानी इकाई छ वा यसले यसको काम स्वचालित रूपमा गर्छ?
शरीरका कुनै पनि अंग बौद्धिक हुँदैन यद्यपि सबै अंगहरू सचेत छन्। संसारमा प्रत्येक जैविक संरचना सचेत हुनुपर्दछ यदि यसको कुनै कार्यात्मक गतिविधि छ। यदि यसलाई यसको प्रकारका बारे सचेत नभएमा यो प्रदर्शन गर्न सक्दैन। तर एक अंग बौद्धिक छैन यदि बौद्धिकताद्वारा दिमागको साथ एक इकाई हो। एक बुद्धिमत्ताको अर्थले हामी एक जना मानिस भनेको को हो जो उच्च हुन सक्छ, तर जो मानिस भन्दा कम छैन। शरीरका अंगहरू बुद्धिमान छैनन्, तर तिनीहरू निर्देशित बुद्धिमता अन्तर्गत कार्य गर्दछन्। शरीरमा प्रत्येक अ्ग एउटा त्यस्तो संस्था द्वारा शासित हुन्छ जुन अंगको विशेष प्रकार्य बारे सचेत हुन्छ। यस सचेत समारोह द्वारा अंगले कोषहरू र अणुहरू र आणविकहरू जसले यसलाई रचना गर्दछ, अंगको कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अणुको श्रृंगारमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक परमाणु अणुको सचेत इकाई द्वारा शासित हुन्छ। सेलको संरचनामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक अणु सेलको प्रबल प्रभावद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ। प्रत्येक अ cell्गको संरचना बनाउने कोष अंगको जैविक चेतना इकाई द्वारा निर्देशित हुन्छ, र शारीरिक संगठनको एक अंगको रूपमा प्रत्येक अ a्ग एक सचेत समन्वयात्मक संरचनात्मक सिद्धान्त द्वारा संचालित हुन्छ जसले सम्पूर्ण शरीरको संगठनलाई नियन्त्रण गर्दछ। एटम, अणु, सेल, अंग प्रत्येक आफ्नो खास कार्यको क्षेत्रमा सचेत छन्। तर यी मध्ये कुनै पनि बौद्धिक भन्न सकिदैन यद्यपि तिनीहरू यान्त्रिक सटीकताका साथ उनीहरूको कार्यको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दछन्।
यदि प्रत्येक अंग वा भौतिक निकायलाई दिमागमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ भने, किन पागल व्यक्तिले आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्दा आफ्नो शरीरको प्रयोग गुमाउँदैन किन?
दिमागका सात कार्यहरू छन्, तर शरीरमा अ organs्गहरूको संख्या ठूलो छ। तसर्थ, प्रत्येक अंग प्रतिनिधित्व गर्न वा दिमागको एक विशेष प्रकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। शरीरका अंगहरू धेरै वर्गहरूमा विभाजित हुन सक्छ। पहिलो डिभिजन शरीरको हेरचाह र संरक्षणको रूपमा आफ्नो पहिलो कर्तव्य को रूपमा अ the्गहरू छुट्याएर बनाउन सकिन्छ। यिनीहरू मध्ये पहिले आर्गनहरु आउँछन् जो पाचन र आत्मसातमा संलग्न छन्। यी अंगहरू जस्तै पेट, कलेजो, मिर्गौला र प्लीहा शरीरको पेटको भागमा हुन्छन्। त्यसपछि ती थोरैसिक गुहामा हुन्छन्, मुटु र फोक्सो, जसलाई रक्सीको अक्सिजन र शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित छ। यी अ्गहरूले अनियन्त्रित र दिमागको नियन्त्रण बिना काम गर्दछन्। दिमागसँग जोडिएका अंगहरूमध्ये मुख्यतया पिट्यूटरी शरीर र पाइनल ग्रन्थि र मस्तिष्कका केही अन्य आन्तरिक अंगहरू हुन्। एक व्यक्ति जसले आफ्नो दिमागको उपयोग गुमाइसकेको छ, वास्तवमा भन्ने हो भने, परीक्षामा देखा पर्नेछ यी केही अंगहरू प्रभावित गर्न। पागलपन एक वा धेरै कारणले हुन सक्छ। कहिलेकाँही तत्काल कारण शारीरिक मात्र हुन्छ, वा यो कुनै मानसिक अस्वाभाविक अवस्थाको कारणले हुन सक्छ, वा पागलपन दिमागको कारणले पूरै छोडिन्छ र एक व्यक्तिबाट टाढा हुन सक्छ। पागलपन केहि शारीरिक कारणहरूद्वारा ल्याउन सकिन्छ, जस्तै मस्तिष्कको आन्तरिक अ of्गहरु मध्येको एक रोग, वा एक असामान्य अवस्था वा थाइरोइड ग्रंथि को घाटा द्वारा। यदि दिमाग संग जोडिएको, वा दिमागले शारीरिक शरीरको संचालन गर्ने कुनै पनि अ lost्गहरू हराएको छ वा तिनीहरूको कार्यले हस्तक्षेप गर्दछ भने, तब दिमाग प्रत्यक्ष रूपमा र शारीरिक शरीर मार्फत कार्य गर्न सक्दैन, यद्यपि यो यससँग जोडिएको हुन सक्छ। । दिमाग त्यसपछि साइकल चालक जस्तो छ जसको मेसिनले आफ्नो प्याडलहरू गुमाएको छ, र यद्यपि त्यसमाथि उसले यसलाई जान सक्दैन। वा दिमागलाई घोडामा सवार सवारसँग दाँज्न सकिन्छ, तर जसको हात र खुट्टा बाँधिएको छ र उसको मुखले यत्तिकै जान्छ कि ऊ जनावरलाई निर्देशन दिन असमर्थ छ। शरीरको कुनै स्नेह वा अ of्ग हराउँदा जुन दिमागले शरीरले काम गर्दछ वा शरीर नियन्त्रण गर्दछ, दिमाग शरीरसँग सम्पर्कमा हुन सक्छ तर यसलाई मार्गदर्शन गर्न असमर्थ।